Maareeyayaasha Mashruuca Su'aalaha Wareysiga Jawaab celinta - ITS Tech School
Maareyayaasha Mashruuca Su'aalaha Wareysiga WaalidiintaU sheegida qof kale oo ka mid ah kooxdu waxay noqon kartaa mid aan fiicnayn - inuu noqdo qayb gaar ah oo ku saabsan garaacista ciddida madaxa. Weligaa ma ogi: Miyuu shakhsi ahaan u gudbinayaa? Isku-dubarida kooxda? Kala soocaan doorashooyinka saxda ah ee ku-meel-gaadhka ah? Waxaa jira su'aalo aad uwanaagsan-si kastaba ha noqotee waxaad ku dhalin kartaa iftiin iyaga oo leh su'aalaha saxda ah.
Markaad ka hadlaysid maamulka jimicsiga booska furan waa wax aan u baahnahay inaan weli sameeyo anigu uma maleynayo in ay fududahay. Sidee baad ku ogaan kartaa wixii su'aal ah? Maxaad ka badantahay, sidee ayaad u isticmaali laheyd sida caadiga ah waqtiga dhabta ah ee kooban si loo siiyo ra'yiga fursad uu ku muujiyo iftiinka ugu fiican?
Maareeyayaasha Mashruuca Su'aalaha Wareysiga
1. Maxaad ubaahan tahay inaad ka faaidaysato?
2. Haddii ay dhacdo in aad u baahantahay inaad sicir u qaadato maamulka xirfad ahaan, 1-10 sidee ayaad u qiimeyn kartaa?
3. Maxay tahay waxyaabaha ugu muhiimsan ee kormeeraha hanti ma guurtada ah?
4. Maxaad maalgelisaa tamarta ugu badan ee wax qabanaysa maalin kasta?
5. Sidee u shaqeyn lahayd taageerayaasha? Sidee baad u kormeeri laheyd?
6. Markay ahayd waqtigii ugu dambeysay ee aadan magacaabin iyo maxay ahayd heshiiska?
7. Maxay ahayd doorashadii ugu xumayd ee aad u baahnayd si aad u sameysid ganacsi?
8. Shuruudo noocee ah ayaad ku oranaysaa inaad ka faa'iideysato helitaanka shaqadaada xigta?
9. Sidee ayaad ufaraxsan tahay foomamka maamulka ganacsiga ee shirkadaada?
10. Waa maxay qaababka cusub ee fikradaha muhiimka ah ee aad isticmaasho?
Intaa waxaa dheer, waa habka ay u sahlan tahay tartamayaasha inay u soo jawaabaan jawaabo tiro badan oo ka mid ah weydiimaha caadiga ah iyada oo sababtu tahay in ay jiraan buugag kala duwan oo ku saabsan xulashada iyo hadalka. Waxay heystaan ​​waqti badan oo ay ku shaqeeyaan jawaabahooda, sidaas darteed wax walba oo dhan waxay dareemi karaan sida laydhka jimicsiga.
Waxaan soo uruuriyay weydiimadayda 10 weydiistey in aan u qoro madaxa shirkada ganacsiga. Waqtiga xiga waxaad u baahan tahay inaad qof u qorto kooxdaada hirgelinta, sababta aanad isku dayin qaar ka mid ah kuwaan?
Wanaagsan sababaha: Waxaa jira qadarin ku xiran shaqaale aan daryeeyno, si kastaba ha noqotee maamulayaasha inta badan waxay qaadaan tallaabo ah hawsha ay ku jiraan. Waa wax fiican in aad leedahay tabaruc, si kastaba ha ahaatee waxaad raadineysaa qof ka soo horjeeda baahida ganacsiga iyada oo aan loo eegin suurtagalnimada in taasi aysan ahayn go'aankooda ugu sarreeya ee ganacsiga.
Xasaasiyad aad u xun: "Waxaan ka boodayaa fursad aan ku qabsado hawlaha aan wax ka qabanayo, runtiina runtii waxaan u baahanahay in aan sameeyo warbaahinta sare. Taasi waa sax, ma dhihi lahayd ma ahan? "
Tan weyn: Tan waxay kuu muujineysaa sida ay u qiimeeyaan xirfaddooda iyo in ay isu arkayaan inay hormarinayaan qaybta PM. Weydii wixii ah sabab macquul ah oo ay u soo qaadeen qiimeyntaas.
Xasaasiyad xun: "Waxaan ku guuleysan lahaa 1 maadaama tan kaliya aan sameynayo si aan u buuxiyo waqtigii aan ka dhigi lahaa meel sharci ah."
Wanaagsan tan iyo: Waxay kuu muujinayaan baahidooda iyo inay dhab ahaantii u malaynayaan madaxa madax-dhaqameedku. Sidoo kale waxay muujinaysaa inay yihiin taakuleyn bulsho oo wanaagsan oo kooxdaada ah. Haddii ay dhacdo in aad haysato xooggaaga xooggan oo ku saabsan geedi socodka, waxayna u maleynayaan in waxyaabaha ugu muhiimsan ay tahay in la is qabadsiiyo oo la isku hagaajiyo foomamka markaad tagto, ka dibna lagama yaabo inaadan helin.
Falcelin xun: "Waa hagaag, waa maamulaha ugu badan, ma odhan lahayd maahan?"
Tan weyn: Tan waxay ku siinaysaa calaamad ah sida ay u qabtaan shaqadooda. Qof kasta oo maalin kasta ku jira PC wuxuu ku haboonaan karaa xaaladdaada, ama waxaad raadin kartaa maamule ganacsade oo soo baxa oo booqanaya macaamiisha maalmaha ugu badnaan todobaadkii. Maskaxda ku hay in laga yaabo in la sameeyo si loo dhamaystiro ikhtiyaarka aan ka ahayn waxa ay hadda sameeyaan, marka ay dhacdo in aad maqasho wax aan ku habboonayn boostada aad uqalantay, ha u dhimeynin ka hor baaritaan tani sii dheer.
Dareenka xun: "Facebook."
Wanaagsan marka la eego xaqiiqda ah: Maaraynta macneheedu waa macquul ahaan shaqeynaya shakhsiyado ka sarreeya adiga. Kordhinta maamulayaasha si joogto ah sidaan, sidaas darteed waa wax weyn in la ogaado sida ay u sameeyaan xiriiriyayaashu waxay shaqeeyaan.
Dareenka xun: "Waxaan u tiirsanahay inaanan helin taageeradayda. Waxay si joogta ah u noqdeen kuwo aan hirgelin, sidaas darteed ma dhibo iyaga. "
Tan weyn: Tan waxay kaa caawineysaa inaad ka shaqeysid fursadda ka-baxsan ee ay ugu faraxsan yihiin inay si buuxda uugu soo baxaan oo ay wax kuu baraan muddada ay wax xun u soo noqdeen. Tani waxay muujinaysaa awoodda ay u leeyihiin in ay ka helaan kormeerka iyo sida ay u maareeyaan xogta ka badan culeyska. Ballanqaadka shaqo-bixinta ayaa muhiim u ah shaqo-abuurka, waxaadna u baahan doontaa inaad qandaraas u gasho qof ku fahansan.
Falcelin xun: "Waligay ma aan wakiishin - way ka yar tahay dalbashada inaan naftayda u sameeyo."
Wixii ka weyn: Waxay soo bandhigi kartaa sida ay u yaqaanaan Xeerarka Aasaasiga ah ee PMI iyo iyada oo aan loo eegin suurtogalnimada inaysan ka fikirin taas, habka guud ee wax looga qaban lahaa shaqada. Waxaad sidoo kale isticmaali kartaa si aad u furto is-weydaarsi xiiso leh oo kuu ogolaato inaad ku xukuntid sida ay ugu haboon yihiin dhaqanka ganacsigaaga.
Waxyeellada xun: "Anigu waxaan heshiis la galay ilma adeer mar, inkastoo xaqiiqda ah inuu yahay kan ugu qaalisan. Si kastaba ha ahaatee, waan ka helay munaasab ah inaan dib u helno. "
Wixii ka weyn: Waxay kuu muujinaysaa waxa muhiimka u ah iyaga shaqadooda: shahaadooyinka cagaaran, dhaqdhaqaaqa xirfadeed, shaqada / nolosha habeynta nolosha, u shaqeynta nooc caan ah iyo wixii la mid ah. Waxay sidoo kale kuu sheegi doontaa in ay si firfircoon uga shaqeynayaan ceyrsiga ama haddii ay arkeen kobcintaada oo aanad iska ilaalin karin (labaduba waa mid fiican).
Xasaasiyad aad u xun: "Magdhow, qorshe kharash iyo fursada aad dibedda ugu safraysid."
Sababta oo ah: Qof kasta ma laha fursad uu ku qaato tallaabo ganacsi asaasiga ah, dhiirigelinta waxqabadka ee CV-ga oo aan fiicneyn, si kastaba ha ahaatee qof kastaa wuxuu leeyahay fursad uu kuugu soo bandhigo soo jeedinnooyin dhowr ah oo isbeddel ah (iyada oo aan loo eegin suurtogalnimada inaysan ahayn la qaaday). Raadi qof ku fekera fikradaha iyo ciddii diiddan inay horay u sii dhigaan.
Waxyeellada xun: "Waa wax walba oo qurux badan oo aanan weli isku dayin inaan dhaqaaqo maadaama ay jirto wax dhib ah."
Wanaagsan tan iyo: Waxay u qalantaa tijaabinta awoodda khaaska ah ee rajada. Ma waxay ku hadlaan si qarsoodi ah oo ku saabsan gumeysiga kalluunka, De Bono ee ujeeda fikirka, iska dhigaan? Ku dadaal si aad ugala hadashid arimaha ugu dambeeyay ee ay ku xalliyaan khilaafka.
Falcelin aad u xun: "Anigu waxaan u nugulahay inaan ilaaliyo arrimahan aniga oo aan ku jirin kooxda."
Maxaa Cusub ee PMI PMBOK Guide Sixth Edition